Ciyaaraha – Page 20 – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Saxiixyada Cusub ee Shkodran Mustafi iyo Lucas Perez o Maanta u Safanaya kooxda Arsenal
Xidigaha Shkodran Mustafi iyo Lucas Perez ayaa galabta la rajeenayaa in ay kooxdooda cusub ay kasoo muuqdaan sida ay ogaadatay Majalada goal.com Shkodran Mustafi iyo Lucas Perez ayaa ka kala yimid kooxaha Valencia iyo Deportivo waxayna qaateen tababarkooda ugu horeeyay ka hor kulanka Southampton oo galabta 05:00 galabnimo dhacaya. Mustafi, ayaa durbadiiba kooxda la qabsaday madaama ay kooxda joogaan xidiagaha Ozil iyo Per ...
Arsene Wenger oo Aaminsan in Jack Wilshere uu Noqon Doono Macalinka Arsenal
Macalinka kooxda Arsenal Arsene Wenger ayaa aaminsan In xidiga qadka dhexe ee Jack Wilshere mar un uu noqon doono macalinka kooxda Arsenal. Xidiga heerka caalami ee xulka dalka England ayaa si amaah ah ku qaadanaya kooxda Bournemout inta ka dhiman ciyareedkan xili mudooyinkii dambe uu la daala dhacayay dhaawacyo. Laakin macalinka Arsenal Wenger ayaa aamisan in Jack Wilshere uu noqon ...
Alexis Sanchez “Waxaan Leeyahay Tayada ay Leeyihiin Xidigaha Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo”,
Xidiga kooxda Arsenal Alexis Sanchez ayaa aaminsan in uu leeyahay tayada ay xiligaan leeyihiin xidigaha dunida ku xifaaltama Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo. Alexis Sanchez ayaa kasoo garab ciyaaray weeraryahanka kooxda Barcelona Lionel Messi waayihiisa Garoonka Camp Nou ka hor inta uusan usoo dhaqaaqin Horyaalka dalka ingiriiska xili ciyaareedkii 2014-15. Xidiga reer Chile ayaa haatan kamid ah xidigaha ugu saameynta ...
Dhageystayaal kusoo dhawaada Barnaamijka Ciyaaraha Radio Simba ee Magaalada Muqdisho waana Duhurnimo Khamiis ah Tariikdana ay ku beegan Tahay 8-9-2016 Ciyaaraha-simba
Dhageystayaal kusoo dhawaada Barnaamijka Ciyaaraha Radio Simba ee Magaalada Muqdisho waana Duhurnimo Arbaco ah Tariikdana ay ku beegan Tahay 7-9-2016 Cayaaraha duhur 7-09-2016
Arsenal iyo Manchester United oo ku Dagaalamaya Saxiixa Xidiga Yaya Toure
Kooxaha Arsenal iyo Manchester United ayaa ku dagaalamaya saxiixa xidigah qadka dhexe ee kooxda Manchester City Yaya Toure sida uu shaaciyay Sky Sports. Xidiga heerka caalami ee xulka dalka Ivory Coast ayaa waayay kalsoonida macalinka cusub ee kooxda Manchester City Pep Guardiola oo fursad siin waayay xidigaan. Sidoo kale Xidiga Yaya Toure ayaa laga saaray Ciyaartoyda Manchester City u matalaya ...
Christian Eriksen oo Heshiis Cusub u Kordhiyay kooxda Totenham
Xidiga Christian Eriksen ayaa heshiis cusub u kordhiyay kooxdiisa Tottenham, taasi oo ka dhigan in muddo kale uu sii joogi doono kooxda. Laacibka ayaa qalinka ku duugay heshiis afar sano oo dhici doona sanadka 2022-ka oo uu kusii joogi doono Garoonka White Hart Lane ee Woqooyiga Magaalada London. 24-sano jirkaan kasoo jeeda dalka Denmarka ayaa kamid ahaa xidigihii ugu muhiinsanaa ...
Dhageystayaal kusoo dhawaada Barnaamijka Ciyaaraha Radio Simba ee Magaalada Muqdisho waana Duhurnimo Talaado ah Tariikdana ay ku beegan Tahay 6-9-2016 Ciyaaraha 06-09-2016
FA Ingiriiska oo ku Dhawaaqay Garsooraha Dhexdhaxaadin Doona Kulanka Derby Manchester
Waxaa si rasmi ah loo shaaciyay garsoorayaasha dhex dhexaadin doona kulamada todobaadka afraad ee Premier Leaque-ga. Kulamda afraad ee horyaalka Ingiriiska ayaa la ciyaari doonaa Sabtida 10 September ilaa Isniinta 12 September iyada oo markale ay kooxaha horyaalka Ingiriisku gorada isla gali doonaan. Waxaa kulamada afraad lagu furi doonaa kulanka ugu adag ee la wada sugayo ee Old Traffrod ku ...
Dhageystayaal kusoo dhawaada Barnaamijka Ciyaaraha Radio Simba ee Magaalada Muqdisho waana Duhurnimo Isniin ah Tariikdana ay ku beegan Tahay 5-9-2016 Cayaaraha duhur 5-09-2016